ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ Mohib Ullah သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ခံရပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း သူဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ ပရဟိတအဖွဲ့ရဲ့ အကြီးတန်းအဖွဲ့ဝင်တဦး အပါအဝင် တခြားအဖွဲ့ဝင်တွေဟာ အသက်အန္တရာယ် ခြိမ်းခြောက် တဲ့ တယ်လီဖုန်း ခေါ်ဆိုချက်တွေကို လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့ AFP သတင်းမှာ ရေးထားပါတယ်။
"ကျနော်တို့ခေါင်းဆောင်နဲ့ တခြားလူတွေကို လက်ရဲဇက်ရဲ သူတို့ပစ်သတ်ခဲ့သလိုပဲ ခင်ဗျားကို လုပ်လာနိုင်ပါ တယ်" လို့ Noor လို့ အမည်ဝှက်ပေးထားသူက AFP ကို ပြောပါတယ်။
Labels: ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်, 2021, mm, စခန်းတွင်းလုံခြုံရေး, သတင်း
Labels: 2021, Article, Economic, en, Myanmar's Junta
အာဆာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က ခေါင်းဆောင်လို့ ယူဆရသူ တစ်ဦး ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ သေဆုံး
3 နိုဝင်ဘာ 2021
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်း ကော့က္ကဆက်စ် ဘဇားက ဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုမှာ ရိုဟင်ဂျာ လက် နက် ကိုင်အုပ်စု ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးလို့ ယူဆရသူကို သေဆုံးလျက်သား တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ ရဲတွေက ပြော ပါတယ်။
အာဆာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကလို့ ယူဆရတဲ့ မိုဟာမက် ဟာရှင်းမ်ဟာ လူအုပ်ကြီးက ဝိုင်းရိုက်တာကို ခံခဲ့ရပုံ ရတယ်လို့ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
အလယ်အလတ် သဘောထားရှိသူ ရိုဟင်ဂျာ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ မိုဟစ်ဘ် အူလာ မကြာသေးခင်က အသတ်ခံခဲ့ရတာဟာ အာဆာအဖွဲ့ရဲ့ လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ စွပ်စွဲနေကြပါတယ်။
Labels: 2021, mm, သတင်း, အာဆာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့, သေဆုံး
ARSA ခေါင်းဆောင် Hashim သည် ရိုဟင်ဂျာ စခန်းတွင် သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိ
Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) ခေါင်းဆောင် Mohammad Hashim ကို Cox's Bazar's Teknaf မှာရှိတဲ့ Whykong Rohingya ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ သေဆုံးနေတာ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါကိစ္စအား အင်္ဂါနေ့ ည ၁၀း၃၀ နာရီတွင် Whykong ရဲကင်းစခန်းမှ SI Mahbubur Rahman မှ မီဒီယာသို့ အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။
သေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဘူး။
Teknaf ရဲတပ်ဖွဲ့ အကြီးအကဲ Hafizur Rahman Chowhdury က ၎င်းတို့သည် ရုပ်အလောင်းကို ပြန်လည်ဆယ်ယူရန် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
Hashim ကို ARSA 'ဒုတိယကွပ်ကဲမှု' အဖြစ် စခန်းတွင် လူသိများသည်။
Labels: 2021, ARSA ခေါင်းဆောင်, Hashim, mm, ရိုဟင်ဂျာ စခန်း, သတင်း, သေဆုံး
Today's News (Quick Search ) October, 2021
2 more suspects arrested with firearm - New Age New Age
Army shelling in Myanmar blamed for setting 160 homes ablaze - Yahoo News Yahoo News
Karnataka first says won't deport Rohingyas, now says will follow SC orders | The News Minute The News Minute
Karnataka govt files revised affidavit in SC for deporting Rohingyas - Times of India Times of India
Karnataka revises its stand on Rohingyas in SC | Latest News India - Hindustan Times Hindustan Times
Military Council Releases 22 Prisoners In Karenni State | Burma News International Burma News International
Myanmar junta jails Suu Kyi's aide for 20 years for treason - New Age New Age
Number of passport applicants declines in pandemic-hit Arakan State | Burma News International Burma News International
Two Churches andaBaptist Office Hit with Incendiary Rockets in Chin State - Persecution.org Persecution.org
U.S. urges probe of Burma torture - The Arkansas Democrat-Gazette The Arkansas Democrat-Gazette
Villages Under Lockdown As COVID-19 Spreads In Demawso Township | Burma News International Burma News International
Who Will Bear the Financial Burden of Supporting the Rohingyas in Bangladesh? - The Diplomat The Diplomat
Will follow Supreme Court's order on Rohingya: Karnataka in affidavit Hindustan Times
Labels: 2021, en, October, Quick Search, Today's News
New Light of Myanmar ( English Newspaper )2021 October.
Labels: 2021, en, Global New Lights of Myanmar, October